Iapile itshintsha amaxabiso ezixhobo ezisetyenziselwa ukurhweba ngaphakathi
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Apple itshintsha amaxabiso ezixhobo ezisetyenziselwa ukurhweba ngaphakathi
Ukuba uhlala urhweba ngokungasetyenziswanga apile isixhobo ukulungiselela ukuthengwa kwento entsha, unokufuna ukunika ingqalelo kwinto esiza kukuxelela yona. Ekupheleni kweveki ephelileyo, I-Apple ilungelelanise ixabiso lokurhweba-ngaphakathi kwezinye iimveliso ukuya phezulu Ngelixa uthoba ixabiso labanye. Umzekelo, ukuba ujonge ukuthenga i-iPad entsha ngokuthengisa kwimodeli endala yokugcina imali, sineendaba ezimnandi kuwe. I-Apple inyuse ixabiso eliphezulu lokurhweba nge-iPad. Umzekelo, i-iPad Pro ngoku ixabisa kangange- $ 525 kurhwebo, inyuka kwi- $ 500.
I-Apple iphakamisa amaxabiso ezinye izixhobo ezinokusetyenziselwa urhwebo ekuthengeni imodeli entsha
Ezinye izixhobo ezifumana ukungqubana kwezorhwebo kumaxabiso zibandakanya i-iPad Air (ukusuka kwi-210 ukuya kwi-250 yeedola), i-iPad (ngoku eyi-240, ukusuka kwi- $ 200), kunye ne-mini mini exabisa i-205 yeedola kwezorhwebo xa kuthelekiswa ne- $ 175 yangaphambili. Uya kuzifumana usenza ngcono kancinci usebenzisa iApple Watch yorhwebo. Uthotho lwexesha le-4 ngoku uza kukunika iidola ezili-10 kwezorhwebo (ukusuka kwi-140 ukuya kwi-150 yeedola) njengoko kuthotho lwesi-3 (ukusuka kwi- $ 85 ukuya kwi- $ 95). Kwaye ukusebenzisa iApple Watch Series 1 ukuthengwa kwemveliso yeApple kuya kuthatha i $ 35 kwixabiso, ukusuka kwi- $ 30.
I-Apple itshintsha ukuxabisa urhwebo-kwezinye zezixhobo zayo
Ezinye iimveliso ezivela kuApple zilahlile ezinye zexabiso labo lokurhweba. Ukurhweba kwiMacBook Pro kuya kukugcinela imali engange- $ 1,530 ngokuthenga okutsha, usihla kwi- $ 1,760. IMacBook Air inexabiso lokurhweba ngexabiso le- $ 630 xa kuthelekiswa ne- $ 730 ngaphambili. Ukurhweba kwiMacBook? Kuya kufuneka ngoku ulindele i-70 $ engaphantsi kurhwebo (ukuya kuthi ga kwi-380 yeedola ukusuka kwi-450 yeedola). I-iMac Pro ngoku inexabiso lokurhweba elivela kwi-Apple ye- $ 3,040 ukusuka kwi- $ 3,580. Ukuhla kwexabiso lokurhweba ngoku kusemthethweni kwi-iMac ($ 1,180 ukusuka kwi- $ 1,390) kunye neMac Mini ($ 830 ukusuka kwi- $ 930). IMacPro ibone ukonyuka okukhulu kwexabiso lezorhwebo ukuya kwi-2,930 yeedola ukusuka kwi-1,490 yeedola kodwa oku kunyuka kungabangelwa kukuba i-Apple ithathe isigqibo sokwamkela iimodeli zamva nje zorhwebo.
I-Apple ikwahlengahlengise nexabiso lokurhweba elibeka kwizixhobo ezithile ze-Android. I-Samsung Galaxy S20 ngoku iya kuzisa kangange- $ 255 ngorhwebo, yehle isuka kwi- $ 270. Kwelinye icala, amaxabiso afunyenwe kwi-Galaxy S10 + kunye neGPS S10 aya phezulu ecaleni kwexabiso lokurhweba lweemodeli zePixel. Umzekelo, ukuthengisa nokuba yiPixel 2 kunye nePixel 2 XL kuya kukugcina kangange- $ 40 ekuthengeni isixhobo seApple njenge-iPhone.
Ngokubhekisele kurhwebo olubandakanya iimodeli ezindala ze-iPhone, i-iPhone 11 Pro Max, i-2019 kunye ne-apos; imodeli ephezulu, inexabiso lokurhweba eliya kuthi ga kwi-500 yeedola. I-iPhone 11 Pro inokukugcina kangange-450 yeedola, kwaye i-iPhone 11 inokubonelela nge-350 yeedola kwityala ukuba isetyenziswa kurhwebo.
Ngaphandle kwemodeli ethile esetyenzisiweyo kurhwebo, imeko yesixhobo ikwagqiba ixabiso. Ngaba mininzi imikrwelo? Ngaba iglasi yaphukile? Ngaba isixhobo sisebenza ngokugqibeleleyo? Ngaba ibhetri isabiza? Iimpendulo zale mibuzo ziya kuhamba ixesha elide ekumiseleni ukuba yimalini i-Apple ezakukubolekisa ngesixhobo esitsha.
Unokufumana ixabiso eliqikelelweyo lokurhweba kwizixhobo zeApple kunye nezinye iimveliso ze-Android ngokundwendwela iivenkile ezikwi-Intanethi kunye neapile; . Njengoko iApple isitsho, 'Rhweba ngesixhobo sakho esifanelekileyo ngetyala ekuthengeni kwakho okulandelayo, okanye ufumane iKhadi leZipho likaApple onokulisebenzisa nanini na. Ukuba isixhobo sakho asikulungelanga ukuthenga ngetyala, siza kusisebenzisa kwakhona simahla. Nokuba yeyiphi imodeli okanye imeko, singayiguqula ibe yinto elungileyo kuwe kunye nokulunga kwiplanethi. '
I-pixel 4a vs iphone se
I-5 yamatyala esikhumba afanelekileyo kunye nemikhono ye-Samsung Galaxy S6 kunye ne-S6
Uyikhuphela njani kwaye uyifakele uhlaziyo lwe-iOS 8 kwi-iPhone yakho, kwi-iPad okanye kwi-iPod touch